Talata, Novambra 15, 2011 Alatsinainy, Novambra 14, 2011 Matt Chandler
Run-DMC Sary natolotr'i Flickr http://www.flickr.com/photos/johannahobbs/
Antsoy aho hoe vokatry ny fanabeazana kanto, fa mino tanteraka aho fa ny fomba fijery an'izao tontolo izao dia tokony ampahalain'ny loharanom-pahalalana sy traikefa maro araka izay azo atao. Ny famakiana ny boky farany nataon'ny manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra misy anao dia tsara. Ny fandaniana lahatsoratra bilaogy sy lahatsoratra vaovao betsaka araka izay azonao atao momba ny indostriao dia manampy. Ny fanatrehana kaonferansa sy ny fandefasana fandaharana mba hampandrosoana ny asanao dia tsara ho anao.
Fa zava-dehibe koa ny mijery any ivelan'ny orbit mahazatra mba hanampy amin'ny famolavolana ny fomba fijerinao. Misy tontolo lehibe lehibe any, ary raha tsy manararaotra izany amin'ny fahafenoana ianao dia tsy hahita.
Aorian'izany ao an-tsaina dia avelao aho hilefa any amin'ny Kings of Rock, razamben'ny hip-hop, Run-DMC, sy izay nampianariny ahy momba ny media sosialy.
Miresaka be loatra ianao
Na aiza na aiza alehanao, na aiza na aiza toerana misy anao / nolazaiko fa miresaka an'io ianao, ary miresaka momba izany ianao… Miresaka ianao rehefa mifoha, henoko fa miresaka ianao rehefa matory / Nisy olona nilaza taminao ve fa mora izany resaka izany ?
Ny dona mahazatra an'ny Twitter dia ny hoe: “Tsy maninona aho ny mamaky momba izay nisakafoanan'ny olona atoandro.” Na dia mazava aza fa misy fampiasana bebe kokoa amin'ny Twitter sy fantsona media sosialy hafa fa tsy amin'ny antsipiriany fotsiny amin'ny fahazarana mahandro sakafo, dia azo atao ny mizara be loatra.
Betsaka ny fikarohana ary ireo sary miaraka aminy dia manome porofo ho an'ny isa tsara indrindra amin'ny fizarana haino aman-jery sosialy isan'andro. Handray ny fahaizako avy aminao aho ary tsy hanazava bebe kokoa momba izay mora azo.
Aleoko kosa manome saina tsotra momba an'io raharaha io. Tsy misy olona te ho voarohirohy-slash-spammed, na dia nisafidy ny hisoratra anarana amin'ny hafatrao aza izy ireo. Ny habetsahana dia tsy manatsara ny kalitaony, indrindra raha toa ka manelingelina ireo mpanaraka anao hatramin'ny fivoahana izany.
Sarotra ny manetsika rima, mampihetsiketsika rima izay ara-potoana, sarotra.
Ny iray amin'ireo tanjona voalohany amin'ny fidirana amin'ny haino aman-jery sosialy dia ny fanamafisana: mandresy lahatra ireo mpankafy sy mpanaraka anao ho mpisolo vava ny marikao sy ny hafatra amin'ny famoahana indray ny atiny. Ireto mpanaraka ireto dia manaraka marika maro hafa, olo-malaza, ary sakaizan'izy ireo manokana. Ahoana no hamakianao ireo tabataba rehetra ireo ary hanaitra ny hetsika?
Ny fomba iray dia ny fanatsarana ny fotoana fandefasanao hafatra hanasongadinana ny atiny. Tsy misy ny tsy fahampian'ny data izay manolotra andro sy fotoana sasany ho tsara kokoa amin'ny famoahana atiny mba hahitana azy kokoa. Tsara raha manararaotra an'ity angona ity ary manao izay rehetra azonao atao mba hamoahana ny atiny eo alohanao.
Nahazo rima aho, def, rima, rima marobe / rima tsy henonao akory taloha / Ankehitriny raha milaza ianao fa henonao ny rima, tsy maintsy miady isika / Satria vao nanao ny rima super-def aho omaly alina.
Satria ny fampivoarana tsirairay dia mahatonga azy ireo ho marani-tsaina kokoa, ny motera fikarohana dia mandinika ny atiny bebe kokoa hatrany amin'ny fomba fanaon'ny olombelona. Midika izany fa tian'izy ireo toy ny mpamaky anao ny atiny voalohany. Ny atiny vaovao sy vaovao tsy tapaka miaraka amin'ny fomba fijerinao manokana (na ny marikao) tsy manam-paharoa dia zava-dehibe amin'ny fahazoana sy fihazonana manaraka.
Fa mora ny mamitaka ny lalanao mankany amin'ny atiny vaovao amin'ny alàlan'ny famoahana na famoahana indray ny fanambarana an-gazety na ny atiny syndication. Tokony ho azonao antoka fa mamoaka atiny mahaliana, ilaina ary sarobidy ianao, ary ambonin'izay rehetra voalohany. Raha tsy izany dia tsy manana tolo-kevitra momba ny sanda manokana ianao ary tsy manome vaovao na fomba fijery vaovao. Ity dia fomba haingana mankany amin'ny tanàna matoatoa haino aman-jery sosialy.
Tags: bilaogyfitorahana bilaogypaikadin'ny atinyHafanàm-po an-barotraFacebookekipa hollissarotra ilay izyRapmihazakazaka dmchaino aman-jery sosialyTwitterbe resaka loatra ianao